रामकुमारी झाँक्रीको ओठतालु नै सुक्नेगरी अध्यक्ष ओलीले सोधे प्रश्न ! - Thulo khabar
रामकुमारी झाँक्रीको ओठतालु नै सुक्नेगरी अध्यक्ष ओलीले सोधे प्रश्न !
काठमाडौ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी०की ने’तृ रामकुमारी झाँक्री नाजवाफ हुनेगरी सिम्पल प्रश्न सोधेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदर्शनमार्गमा आयोजित तत्कालीन नेकपाको दाहाल(नेपाल समूहको आमसभामा बोल्न पाइन्छ भन्दै फिल्मी शैलीमा स्टिकर फुकालेको प्रसं’गमा ओलीले सोमबार झाँ’क्रीलाई मुखभरीको जवाफ फर्काएका हुन्।
झाँक्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ९ओली०विरुद्ध जथाभावी बोलेको भन्दै तत्कालीन सरकारले गिरफ्तार गर्ने चर्चाकाबीच झाँक्रीले प्रदर्शनीमार्गमा बोल्न पाइन्छ भनेर प्रदर्शन गरेकी थिइन्।
अहिले उनै झाँ’क्रीको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकारले छिमेकी देशकाराष्ट्रप्रमुखवि’रुद्ध वि’रोध प्रदर्शन
नगर्न र पुत्ला दहन नगर्न आग्रह गरेका बेला ओलीले झाँ’क्रीलाई प्रश्नसहित जवाफ दिएका हुन् । आफैले टाँसेको टेप, मास्क फुत्त फालेर फिल्मी स्टाइलमा चट चट फालेर बोल्न पाइन्छ भन्नेहरुलाई अहिले म सोध्न चाहन्छु
तिनीहरु, तिनीहरुको सरकारलाई, देशकोबारेमा, राष्ट्रिय’ताकोबारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन रु देशकोबारे, राष्ट्रि’यताकोबारेमा बोल्न पाउनुपर्छरु ओलीले भने ।
ओलीले त्यति बेला झाँ’क्रीले अ’श्लील, छा’डा बोलेको भन्दै आ’क्रोश पोखे ।
आफैंले टाँसेको टेप फुकालेर बोल्न पाइन्छ भन्या छन्। अहिले किन भन्न सक्दैनन् रु ति दल, ति दलका नेताहरु, अपराधका हिस्से’दारहरु किन बोल्दैनन् रु हिजो त जसलाई जे पनि गाली गरेको छ।
माइतीघर वरिपरी दिनैपिच्छे गाली गरेर बस्या छ। अहिले कहाँ छन् रुु ओलीले प्रश्न गरे,हिजो अधि’नायकवाद र निरशंकुता भो रे। अहिले लोकता’न्त्रिक वाक स्वतन्त्रा भो र रु अहिले संविधानविपरीत सिधै चुनौ’ती दिएर बोलेमा कार’बाही गर्छु भन्छ।
शासन दम’नकारी हुन पाउँदैन। शा’न्तिपूर्ण विरो’ध अभिव्यक्ति स्वत’न्त्रता, वि’रोध प्रदर्शनको स्वत’न्त्रता खोस्न सकिँदैन । खोस्नेलाई ता’नाशाह भनिन्छ । तानाशाही टिक्दैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । -अन्लाईन मार्ग